Ogaden News Agency (ONA) – Wariyeyaashii Swedish-ka dusha ayaa laga ilaalsanayay
Wariyeyaashii Swedish-ka dusha ayaa laga ilaalsanayay
Waxaa qoraal aad u dheer kana hadlaya warbixino sir ah oo ku saabsan wariyeyaashii Swidhiska ahaa ee Ogadenya lagu xidhay 1dii julay 2011 lagu soo daabacay mid ka mid ah joornaalada sida aadka ah loo akhristo wadanka Sweden taariikhdu markay aheyd 4 december 2011 saacada 08:46
Qoraalkan oo ay ku fara yareysatay gabadha qoraaga ah ee arimaha Ogadenya & shirkada shidaalka Lundin Petroleum sida aadka uga sheekeysa ayaa waxay soo qortay in wariyeyaashii Martin Schibbye & Johan Persson ee Ogadenya lagu xidhay intii aysan Sweden ka ambabixinba lala socday oo safarkooda iyo warbixinadooda ay ka horeeyeen.
Kerstin Lundell oo ah gabadha sirtan soo shaac bixisay ayaa sheegtay inay jiraan dad warbixinada halkan ka dhiibay oo Itobiya u jooga Sweden sidaas darteedna ragan safarkooda waa lala socday.
Waxay tidhi Kerstin Lundell ” Qof aan wareysanay isla markaana aanan dooneynin inaan magacisa sheegno ayaa nugu yidhi waxaan maqlayay bilaawgii bishii June in rag joornaaliiste yaal ah ay Ogadenya safar ku tagi doonaan”.
Bil kadib waxaa dhacday in ragii wariyeyaasha ahaa safarkooda lasii ogaado isla markaana la xidho. Dad aad u yar ayaa howshan ku jira, ayay tidhi qoraaga qoraalka.
Qofka ii waramayay si toos ah oo aan ganbasho laheyn ayuu wax waliba iigu sheegay, in arinkan uu sii maqlay, balse diiday in sida iyo meesha uu ka maqlay uu ii sheego, waxaana sabab u ah in dhamaan ehelkiisii ay wadankii Ogadenya ku nool yihiin isla markaana hadii la ogaado inuu arinkan ka hadlayna ay dhamaan reerku qatar xoog leh soo foodsaareyso.
Xerya qaxootiga sida dhadhaab ayay Ethiopia dad u joogaan, isla markaana wariye yaashii Martin Schibbye & Johan Persson safarkooda wuxuu ahaa mid la sugayay.
Arintan inSweden warbixinta laga dhiibay waxaa kuu cadeynayo in websideka Ethiopia ay leedahay ee Cakaaranews lagu qoray ” waxaan aad ugu mahad celineynaa jawaasiisteena qurba joogta ah kuwaas oo inoo soo gacan galiyay dadkan cadaanka ah, gaar ahaan kuwa ku nool wadamada Kenya, Gaalkacyo, Sweden, UK iyo Australia.” Sidaa ayaa lagu qoray 3dii july ee sanadkan. Websidekan waxuu si isdaba joog ah u sheeganayay in ragan arintooda ayla socdeen ka hor intii aysan Europé kasoo dhaqaaqin.
Mohamed Hussein oo ah wakiilka ONLF ee Sweden & Amiin Barkhadle oo isaguna ah gudoomiyaha ururka dhalin yarada Ogaden OYSU ayaa arinkan jaajuusnimada Sweden dhexdeeda ah cadeeyay, waxayna sheegen in dadka jaajuusa ay ku dhex nool yihiin kuna dhuumanayan bulshada reer Ogadenya eeSwedendagan.
Amin Barkhadle ayaa isagu naftiisa qirtay in xitaa handadaad loo geystay loona sheegay inuu joojiyo howlaha uu ka wado ururkan.
Ugu danbeyntii gabadhan oo qoraal aad u dheer aadna loo faah faahiyay ka qortay maqaalkan jaajuusnimada ah ayaa waxaad mooda in dowlada iyo wariye yaashaswedenay usoo jeedsadeen dhibka qarsoonaa ee shacabka Ogaden lagu hayay. Waxa socdo baaritaano hoose oo ay wadaan ururo iyo wariye yaal kala duwan kuna saabsan siyaabaha dadka shacabka ah lagu wax yeeleeyo iyagoo halkan jooga .